प्रतिष्ठानमा फोहोर र दुर्गन्ध, शुल्क वृद्धि कायमै – Rajmarg Online
प्रतिष्ठानमा फोहोर र दुर्गन्ध, शुल्क वृद्धि कायमै
विरामी कुरुवाहरु शौचालय र वेडहरु सफा गर्न बाध्य
दाङ, माघ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा विरामी लिएर आउनु भएकी कपिलबस्तु चन्द्रौटाकी डम्मा गजुरेलले अस्पतालको शौचालय सोहोर्नु प¥यो । जेठानीको उपचारका लागि विहिबार घोराही आउनु भएकी डम्माले प्रतिष्ठानको शौचालय आफैले सोहोर्नु परेको बताउनुभयो ।
‘फोहोर नै फोहोर थियो, खुट्टा टेक्ने ठाउँ थिएन, जेठानीलाई छिन छिन मै ट्वाईलेट लैजानुपर्छ ।’ उहाले भन्नुभयो, ‘नर्ससँग कराएँ, कराएर के गर्नु, आन्दोलन भैराको रैछ, थाहा भएन, त्यै भएर आफैले सफा गरेँ ।’ कार्यालयको काम गर्ने कर्मचारीहरु आन्दोलित भएपछि ३÷४ दिन देखि फोहोर उठ्न सकेको छैन भने विरामी बस्ने कोठाहरुको समेत सरसफाई भएको छैन । विरामी र विरामीका कुरुवाले आफै बेड सफा गर्ने र बेड मिलाउने गरको कुरुवा गजुरेलले बताउनुभयो ।
धुनुपर्ने कपडाहरु कोठाको कुना कुनामा फालिएको छ, सबै शौचालयहरु फोहोर छन् भने रगताम्मे प्याड सहितका संक्रमित बस्तुहरु यत्रतत्र छरिएको अबस्थामा छन् । शुक्रबार दिउँसो सुनसान प्रसुती वार्डमा फोहोरको दुगन्धले भित्र पस्न नसक्ने अबस्था रहेको थियो । विरामी वार्ड पस्ने ढोका ढोकामा फोहोरले भरिएका डष्टविनहरु छन् ।
तत्कालिन अस्पताल विकास समिति र नेपाल सरकारबाट करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीले अस्पताल प्राङगणमा ब्यानर टाँगेर धर्ना दिईरहेका छन् । आन्दोलनका कारण अस्पतालको काम प्रभावित बनेको छ । अस्पतालबाट समयमै उपचार लिन नसकेको सेवाग्राहीहरुले बताएका छन् । घोराही उपमहानगरपालिका १३ सेवारकी निमाकुमारी नेपालीले नाम मात्रै लेखाउन १ घण्टा कुर्नु परेको बताउनुभयो ।
शुल्क वृद्धि कायमै
उच्च अदालत तुलसीपुरले शुल्क वृद्धि रोक्न आदेश गर्दै संविधान एवं विभिन्न ऐन नियमको व्याख्या गरी प्रतिष्ठान नेपाल सरकारको निती र निर्देशनमा चल्नु पर्ने निकाय भएको स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । सरकारको निर्देशन भन्दा वाहिर जान नमिल्ने प्रतिष्ठानले अहिले पनि घुमाउरो पारामा मोटो शुल्क अशुल्दै आएको छ ।
उच्च अदालतले शुल्क नवढाउन २०७५ पौष १८ गते अन्तरीम आदेश जारी गरेको थियो । तर प्रतिष्ठानले विभिन्न वहाना वनाएर चर्को शुल्क यथावत लिएको पाईएको छ । १२ बजेपछि नाम दर्ता गर्न ४ सय रुपैया लिँदै आएको छ । १२ बजेपछि नाम दर्ता गर्ने विरामीले ४ सय रुपैया तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । जनतालाई सेवा दिने नाममा अदालतको मानहानी हुने गरि प्रतिष्ठानले काम गर्दै आएको छ ।
नीति विपरित सम्पर्क कार्यालय
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीले २०७४ मंसिर २६ गते गरेको निर्णय अनुसार उपकुलपतिमा नियुक्त डा. संगिता भण्डारी पुस ३ गते दाङ आउनु भएको थियो । दाङमा कोही कसैसँग समन्वय तथा जनप्रतिनिधीसँग समेत भेटघाट र छलफल नगरी माघ २२ गते काठमाण्डौमा पहिलो सिनेट बसेको थियो ।
सरकारको नीति विपरित काठमाण्डौमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेर सुरु गरिएको प्रतिष्ठानको पहिलो गतिविधि मै दाङका जिल्लाबासीहरुले प्रश्न उठाएका थिए । नेपाल सरकारले सवै क्षेत्रका सम्पर्क कार्यालय वन्दगरी सम्वन्धीत मुख्य कार्यालयबाटै काम कारवाही गर्ने निती लिएको छ, तर उपकुलपति डा. भण्डारीले निती विपरीत काठमाण्डौमा सम्पर्क कार्यालय चलाइरहनु भएको छ । सम्पर्क कार्यालयमा नै लेखापाल र स्टोरकिपर समेत राखेर दोहोरो लेखा प्रणाली वनाएर आर्थिक कारोवार गरीरहनु भएको छ ।
गत साउन देखी अस्पतालका कर्मचारीलाई तलव खुवाइएको छैन भने उपकुलपतिले एक करोड रुपैयाँ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयवाट निकासा लिएको देखिन्छ । तलव र समायोजन गर्न माग गर्दै कर्मचारीलाई तलव नखुवाउने तर करोडौँ रुपैयाँ काठमाण्डौ लगिएको छ ।
माग सम्बोधन भएन
आकस्मिक र प्रसुती सेवा बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द छन् । बन्दका कारण सेवाग्राहीहरु मर्कामा परेपछि आन्दोलनकारीहरुको माग सम्बोधन भएको छैन । आन्दोलित कर्मचारीहरुले कर्मचारीहरुको समायोजन हुनुपर्ने, तवल खुवाउनुपर्ने, सुविधा कटौती गर्न नहुनेलगायतका ८ बुँदे माग राख्दै आएका छन् ।
प्रतिष्ठानले साविक राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल विकास समिति र नेपाल सरकारमा श्रेणी विहिन कर्मचारीहरुको म्याद थप नगरेको साथै चिकित्सकको समेत म्याद थपका लागि आवश्यक सिफरिस नगरेपछि आन्दोलन थालेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष हेमराज गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिष्ठानले तत्काल म्याद थप गरेर समायोजन गर्नुको साटो साविक अस्पताल विकास समिति र सरकारका करार कर्मचारीलाई निस्कासन गर्न पत्र तयार पारेको भन्दै अध्यक्ष गौतमले बाध्य भएर आफूहरु आन्दोलित भएको बताउनुभयो ।